နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၉) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 15, 2014 at 14:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ situational dialogues တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ dialogues တွေဖြစ်ပေမဲ့ စံနစ်တစ်ကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ situational dialogue ကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Patty : How old are you?
Susan : Nine.. . But I’ll be ten on May sixteenth.
Patty : I’m older than you! I'll be ten on May fourteenth.
Susan : Are you going to haveabirthday party?
Patty : Maybe. I'll have to ask my mother.
Patty နဲ့ Susan တို့ စကားပြောတဲ့အကြောင်းထဲက ဂဏန်းတွေကို စိတ်နဲ့ နားထောင် ကြည့်ရအောင်။
Susan က သူ့အသက်ဘယ်လောက်လဲ လို့မေးတော့ Nine လို့တစ်လုံးတည်းပဲပြန်ပြောတယ်။
English လို သဘာဝကျကျ ပြောရင် I'm nine years old. လို့ပြောမဲ့အစား Nine ပဲပြောရတယ်။ မြန်မာစကားမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကို အသက်မေးလာရင် ကိုယ့်အသက်ကို ဂဏန်း တစ်လုံးတည်းနဲ့ ပြန်ပြောရုံပဲမဟုတ်လား။ အပြည့်အစုံပြောရင်သဘာဝမကျဘူး။
ဒီစကားလုံးရဲ့ second syllable မှာ strong stress ထည့်ပြောတယ်။ (ဒါမှ stress pattern နဲ့ နောက်ဆုံး consonant အသံ /n/ က sixteen နဲ့sixty မရောအောင် ခွဲခြားပေးမှာပေါ့။) sixteenth နဲ့ sixtieth ကို စာဖတ်သူတို့ အသံထွက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ အခြားသူ တစ်ယောက်ယောက်ကို နားထောင်ခိုင်း။ နားထောင်သူက ကိုယ်အသံထွက်တာကို ခွဲသိနိုင်ရင် OK ပြီ။
တစ်ချို့တွေဟာ date ပြောရင် လ နဲ့ ရက် ကြားမှာ article 'the' ကို ထည့်ပြောကြတယ်။ ဥပမာ - May the sixteenth, June the fourteenth စသည်ဖြင့် ပြောကြတယ်နော်။
"I'll be ten on May fourteenth."
Patty ပြန်ပြောတဲ့ အခါမှာတော့ fourteenth ရဲ့ first syllable မှာ contrastive stress ထည့်ပြောတယ်။ Susan ပြောတဲ့ ရက်စွဲ နဲ့မတူအောင်ခွဲပြောလို့ပါ။ (တစ်ကယ်တော့ ပုံမှန်အားဖြင့် second syllable မှာ strong stress ထည့်ပြောတယ်။) ဒါပေမဲ့ ပြောသူက date နှစ်ခု ကွဲပြားစေဖို့အတွက် four ကို emphasise လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်မှာ going to ဟာ အသံပျော့ ၃ သံ ပါတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပေမဲ့ စကားပြောမှာ consonant အသံတစ်ချို့ ပျောက်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းသွားတာ ဖြစ်ပြီး vowel အသံက ပျော့ပျော့ပဲထွက်တော့တယ်။ အဲဒီတော့ going to က အမြန်အသံထွက်ရင် gonna ဖြစ်သွားတယ။်
"Birthday party (birth + day)"
Compound noun တွေကို အသံထွက်ရင် ပထမ စကားလုံး first element ပေါ်မှာပဲ stress ထည့်ပြောရမယ်နော်။
မသေချာတဲ့ဟာ တစ်ခုကိုပြောရင် maybe ကိုသုံးတယ်။ (indicating doubt, indecision or lack of completion)
Full stop အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ကွင်းခတ်ခြင်း
'အီး' အသံထွက်ဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် စာလုံးပေါင်းခြင်း (Spelling the/ i:...
မသိသေးတဲ့အတိုင်း (As if you didn’t already know! by Guy Perring)
Permalink Reply by thinkhaingsoe on October 15, 2014 at 17:19
Permalink Reply by Moh Moh Aye Nyein on October 20, 2014 at 0:27
Permalink Reply by Nilar on October 31, 2014 at 10:00